Dilal Iyo Dhac Koox Hubaysani Ku Fuliyeen Shaqaale Ha’yadeed Iyo Xawaalada Qaran Deegaanka Laasqoray | Araweelo News Network (Archive) -
Dilal Iyo Dhac Koox Hubaysani Ku Fuliyeen Shaqaale Ha’yadeed Iyo Xawaalada Qaran Deegaanka Laasqoray
Laasqoray(ANN) Kooxo hubaysan ayaa ka fuliyay duleedka deegaanka Laasqoray ee gobolka Sanaag falal isugu jira dilal iyo dhac ay ugu gaysteen qaar ka mid ah shaqaalaha xawaaladda Qaran iyo Hay’adda Horn Relief. Sidaana waxa u xaqiijiyay
shebekadda Araweelonews warar laga helay dadka deegaanka.
Kooxahan hubaysan ayaa la sheegay in ay dil u gaysteen 1-ruux sidoo kale ay dhaawac u gaysteen 2-kale, qofka dhintay iyo labada dhaawacmay ayaa ka kala tirsanaa shaqaalaha Horn Relief iyo xawaaladda Qaran Expreess. Iyagoo xawaaladda ka qaatay lacag lagu qiyaasay $30,000, taas oo uu maamulka Degmada Laasqoray ku sheegay mid loogu talagalay taageeridda dad dhibaataysan oo ku nool Deegaanka Saliid ee duleedka Laasqoray oo qiyaastii 30-km u jira Magaalada xeebta ah ee Laasqoray.
Guddoomiyaha Degmada Laasqoray Yuusuf Jaamac Debed ayaa sheegay in la garanayo dadkii falalkaa sameeyay, wuxuuna faah faahin ka bixiyey dilka iyo dhaca ka dhacay Deegaanka Afka Saliid, isagoo sheegay in kooxdaasi dhacday lacag loogu taagalay in lagu taageero dad dhibaataysan, sidoo kale wuxuu tibaaxay in kooxaha dilka gaystay ay ka baxsadeen goobta uu dilku ka dhacay markii ay falalkaa dilalka iyo dhaca fuliyeen kadib.
Laakiin Guddoomiyahu wuxuu sheegay in beelaha ay kasoo jeedaan kooxaha dilalka, dhaawaca iyo dhaca gaystay ay ku mashquulsan yihiin sidii loo xalin lahaa arrintan ka dhacday Deegaanka Afka Saliid ee Degmada Laasqoray.
Wuxuuna tilmaamay inay arrintaasi saamayn ku yeelatay Degmada Laasqoray iyo Deegaanada hoosyimaada, isla markaana ay khal -khal galisay amniga Deegaanka uu falku ka dhacay, sidoo kale wuxuu xusay in dadkii dhibaataysnaa ee loogu talagalay lacagta gar gaarka ahayd ay halkoodii ku dhibaataysan yihiin, kuwaas oo u baahan gurmad.